» Qodobo loo sababeeyay amni darada ka taagan Shabeelaha Hoose
Qodobo loo sababeeyay amni darada ka taagan Shabeelaha Hoose
Dec 7, 2012 - jawaab	Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose ee Dowladda Soomaaliya ayaa shaaciyay sababaha ugu waaaweyn ee amnidarada ku dhalisay Gobalka Shabeelaha Hoose iyo in Dowladda Soomaaliya ay wax ka qaban weeyday amndirada ka jirta Gobalkaasi.
Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose ee Dowladda Soomaaliya C/qaadir Maxamed ayaa sheegay in qodobka koowaad uu yahay in Gobalkaasi aysan ku sugneen ciidamo Booliis ah iyo sidoo kale Nabadsugid oo wax ka qabta ammaanka Gobalkaasi.
Qodobka 2aad ayuu ku sheegay Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose ammaandarida ka jirta Gobalkaasi in ciidamo badan oo Dowladda ka tirsan aysan joogin Gobalkaasi si meesha looga saaro awooda Shabaab oo uu sheegay in maalmahan dambe ay noqdeen kuwa sii xoogeeysanaya.
Roobab ka da’ay Gobalka Shabeelaha Hoose oo xirya wadooyin badan oo ku yaalay Gobalkaasi ayuu ku tilmaamay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ka gudbiyeen si meesha looga saaro Shabaabka ku sugna Deeganada Gobalka Shabeelaha Hoose.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Gobalka Shabelaha Hoose ee Dowladda Soomaaliya C/qaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa sheegay in Shabaab iminka ay bilaabeen qal qalgelinta dhanka ammank ee Gobalka Shabeelaha Hoose iyo inay weeraro ku qaadaan wafuuda ka tirsan Dowladda Soomaaliya ee isticmaalaya Gobalkaasi.
Al-Shabaab ayaa dhawaanahan bilaabay weerarada ay ku qalqalgelinayaan ammaanka wasiirada socdaalka ku tagaya Gobalka Shabeelaha Hoose.
« Warbixinta Ka HoreysayCiidamadi u jiheystay Jowhar oo dib usoo laabtay iyo jawiga magaalada	Warbixinta Xigto »Deg deg :- qarax ka dhacay Masaajid ku yaala Xaafadda Islii Nairobi	Leave a Reply Cancel reply